रचनात्मक सामग्री उत्पादनको लागि 12 पथ | Martech Zone
रचनात्मक सामग्री उत्पादनको लागि १२ पथ
बुधबार, अक्टोबर 26, 2011 आइतबार, अगस्त 26, 2012 Douglas Karr
हामीसँग थियो हिजो अद्भुत वेबिनार संग पीआर Newswire र जुमेरंग, १,1,600०० भन्दा बढी व्यक्तिको दर्ता गरियो !!! वेबिनार एक संयुक्त वेबिनारसँग थियो जोन ओ'कॉननेल, एक PR र संचार सल्लाहकार बाट HNTB.
मैले यहाँ वितरणको लागि अनुकूल ढाँचामा मेरो प्रस्तुतीकरण परिवर्तन गरेको छु:
रचनात्मक सामग्री उत्पादनको लागि १२ पथहरू:
बुझ्नुहोस् उद्देश्य तपाइँको आगन्तुकहरु को।
बेच्न रोक्नुहोस् र मान प्रदान गर्नुहोस् यसको सट्टामा तपाइँको पाठकहरूलाई।
तपाइँको ग्राहकहरु र संभावनाहरु के चाहानुहुन्छ पत्ता लगाउनुहोस्!
इन्द्रियलाई खुवाउनुहोस्: पाठ, अडियो, भिडियो र अन्तर्क्रियात्मक मिडिया।
सर्वेक्षण र सर्वेक्षणहरू एक मुख्य सामग्री रणनीति बनाउनुहोस्।
प्रत्येक मार्फत एउटै सन्देश बिभिन्न तरीकाले डेलिभर गर्नुहोस् नयाँ माध्यम.
क्रस-प्रबर्धन प्रत्येक माध्यम एक अर्को गर्न।
सामग्री फायर सुरू गर्नुहोस्! प्रयोग गर्न सुरू गर्नुहोस् Infographics.
सक्षम गर्नुहोस् र सामाजिक साझेदारीलाई प्रोत्साहित गर्नुहोस्... सामाजिक बटन जोड्नुहोस्!
सतर्क रहनुहोस् र खोज्नुहोस् नयाँ दर्शकहरु तपाईंको सामग्री प्रचार गरेर।
मापन गर्नुहोस् परिणाम र के राम्रो काम गर्छ प्रयोग गर्नुहोस्।
पुनरुत्थान पुरानो सामग्री र यसलाई पुन: प्रयोग गर्नुहोस् र यसलाई पुनः प्रचार गर्नुहोस्!
यो एक उत्कृष्ट मतदान संग एक शानदार वेबिनार थियो। यस्तो देखिन्छ कि आजकल सामग्री सबैको दिमागमा छ! म आशा गर्दछु कि प्रस्तुतीकरणबाट टेकवेहरू ती हुन् कि सर्वेक्षणहरू र सर्वेक्षणहरू प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गर्ने, साथै PR जस्तै उपकरणहरू मार्फत तपाईंको सामग्री प्रमोट गर्ने, र इन्फोग्राफिक्स जस्ता माध्यमहरूमा तपाईंको सामग्री पुन: प्रयोग गर्ने उत्कृष्ट सामग्री रणनीतिको कुञ्जी हो!
गुगलको कीवर्ड Apocalypse